DAAWO: Puntland oo taageero siinaysa Jabhada kasoo horjeeda Somaliland ee Col, Caare hogaamiyo.
GAROOWE(P-TIMES) – Wasiirka Xanaanada Xoolaha Puntland Siciid Maxamed Aden oo wariyayaasha kula hadlayay magaalada Garoowe ee caasumada Puntland ayaa daaha ka rogay in ay diyaar u yihiin in ay taageero siiyeen Korneyl Caare oo horey iskugu abaabushay ciidamadiisa gudaha Puntland, kaas oo ka soo horjeeda Xukuumadda Somaliland.
Wasiirka ayaa ka jawaabay hadalkii shalay ka soo yeeray Taliyaha ciidamada Somaliland Nuux Taani Ismaaciil ee kuwajahnaa in ciidamada gobalka Sanaag ee horey uga tirsanaa Somaliland kuna biiray haatan Puntland, ay ahaayeen kuwa aan waxba u qaban jirin dhanka Somaliland.
Wasiirka ayaa kusifeeyey hadalkaas in uu yahay mid muujinaya fashilka Xukuumadda Somaliland, wuxuuna sheegay in warka Taani uu yahay mawqifka ay aaminsan tahay Madaxtooyada Hargeysa, gaar ahaana Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Col, Caare ayaa ka dagaalama buuraleyda gobalka Sanaag, waxaana dhawaan uu dagaal la galay ciidamada Somaliland, balse wada hadalo ay garwadeen ka ahaayeen qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka ayaa fashilmay, markii uu shalay Taliyaha ciidamada Somaliland sheegay in Caare la toogan doono.
Warka Puntland kasoo baxay ayaa ku soo beegmaya xili dhawaan Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu shaaciyey in ay diyaar u yihiin wada hadal ay lagalaan Somaliland, isagoo sheegay in ay wax kasta wada hadal ku dhameyn doonaan, gaar ahaana is heysiga xagga xaduudaha ee labada maamul mudada dheer u dhaxeeyey.